Maajo | 2011 | WEEJIDOW
Archive for Maajo, 2011
Shariif Xasan Oo Mogsdisho Dib Ugu Soo Laabtey.
Maajo 31, 2011
Gudoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya Shariif Xasan Sh. Aadan iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa maaanta dib uga soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya.
Shariif Xasan Sh. Aadan, gudoomiyaha Baarlamanka iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa ka soo degtay gegida diyaaradaha Aadan waxaama uuna gaduumiyuhu ka soo qayb gallay shirkii QM ay u qabatay madaxda sare ee dawlada KMG-Soomaaliya 25-bishan May.
Shariif Xasan ayaa sidoo kale kulan kula soo qaatay dalka Jabuuti madaxwenaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Geele waxaana uu dib u soo maray dalka Kenya oo markii hore ka tagay.
Shariif Xasan gudoomiyaha Baarlamanka ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo natiijadii ka soo baxday shirkii Neyroobi, isagoona intiisa ku daray in wada hadlaan isaga iyo madaxda kale ee dalka haddan ay
QOREYAASHA MAHAATIRI IYO QOWMIYADDA DIGILMIRIFLE YAA U KALA GAR QAADA Q-1aad
In kastoo aan u dhashey qowmiyadda DigilMirifle, hadana wax iga celin karo ma jiraan in aan u kala gar qaado qoreyaasha soomaaliyeed iyo qowmiyadda DigilMirifle, gaar ahaan qoraaga lagu magacaabo Abdirahman Hoosh, oo wax ka qorey Qowmiyadda DigilMirifle iyo khadiyadooda taariikheed kow iyo hadda, RRA iyo Hogaankeeda, gaar ahaan Hasan Mahamed Nuur “Shaati Gaduud”.
Anigoon rabin in aan difaaco niman aan difaac u baahneyn iyo jabhad aan ujeedadeedu qarsooneyn, ayaa waxaan rabaa oo keliya in maqaalkii uu Cabdirahmaan Hoosh ku soo qaatey arinta ah, In DigilMirifle ka dib markii ay dibadda ka soo arkeen in uu jiro nidaam Federaal ah, ayey hada bilaabeen in ay la bood-boodaan Federaal baan rabnaa.
Sababtuna ay tahay oo keliya baahida loo qabo in wax walba runta laga sheego, shey walbana aan loogu yeerin magac uusan laheyn iyo ayadoo aan rabo in qadiyadani ay noqoto miisaankii ugu horeeyey ee loogu kala gar qaado qoreyaasha aan xishooneyn iyo Qowmiyadda DigilMirifle.
Waxaan kaloo cadeynayaa in aan qiimo weyn iigu fadhin in aan eedeyn ula bareero qoreyaahsa qaarkood ee aan nasiibka ku laheyn qorista xaqiiqda iyo qiimeynta amaanada qalinka, sida walaalkeen Abdirahmaan Hoosh, maxaa yeeley waxaan hubaa in qof waliba aanu ka badin karin in uu soo qoro in ka fiican qiyaasta aqoontiisa iyo qiimaha caqligiisa.
Waxaan Ibnu Aadam in aan ahay tusid iyo tusaaleba aan umadda soomaaliyeed iyo qoreyaasheena aan ugu soo qaato barnaamij socdey mudo sedex bilood ah ee looga hadlaayey taariikhdii hore ee soomaalida, gaar ahaan koofurta soomaaliya oo lagu marti qaadey qoraagii caanka ahaan ALLAH ha u naxriistee oo u dhashey qowmiyadda DigilMirifle, magiciisuna la yiraahdo Mr, Dr: Ahmed-Rashiid Sheekh Mahamed “Qul-Qul”, lagana soo daayey telefishen ku yaal dalka CANADA ‘kanada’, magiciisuna la yiraahdo “ROGERS” ahna telefishinada kuwa ugu caansan dalka CANADA, xaruntiisuna ay tahay OTTAWA, qeybtii ugu horeysey ee doodaas waxaa la soo daayey bishii Oktoober 22, 24, 26, sanadkii 1999-ki, qeybtii labaadna waxaa la soo daayey bishii November 4, 17, isla sanadkii 1999-ki, waxaana lagu wada marti qaadey dhamaan wax garadka soomaaliyeed ee joogaan North America, waxaana uu TV-ga ugu dan lahaa in soomaalida ay barato taariikhdeeda saxa ah iyo tan khaladka ahba, runteeda iyo beenteeda, si aan been abuur u dhicin mustaqbalka soo socda, wixii horey u dhacay oo kale.
Waxaa kale oo lagu marti qaadey taageerayaashii labadii xisbi ee ka jirey koofurta Soomaaliya ka hor sanadkii 1960-ki, intey xoriyada qaadan soomaaliya, ee la kala oran jirey Hisbiyo iyo Leego.
Barnaamijkaas oo aan u wada sineyn anaga iyo Abdirahmaan Hoosh iyo dhamaan jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool Canada, iyo intii kale ee kala socotey internet-ka, waxaa lagu bilaabey wareysigii Mr,Dr: Ahmed-Rashiid Sheekh Mahamed “Qul-Qul” oo markii aan wareystey isugu key sheegey in uu yahay DigilMirifle, kana ahaa reer Baydhowi, ALLAAh ha u naxariistee.
Deegaanka Kulbiyow ee Jubbada Hoose Oo Dagaal Ka Dhacay.
Dagaal sababay khasaare naf iyo maalba leh ayaa ka bilowday deegaanka Kulbiyow ee gobolka Jubbada Hoose, iyadoo dagaalka uu socoday tan iyo barqadii manta.
Dagaalka oo la sheegay inuu u dhaxeeyo dowladda KMG ee Soomaaliya iyo maleeshiyada Al Shabaab, ayaa dad rayid ah oo ka barakcay waxay gaareen deegaanka Haluqu oo ku yaallo xadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya.
Dagaalka ka bilowday degaanka Kulbiyow ayaan ilaa iyo hada si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha ka dhashay iyo cidda ku gacan sareysa.
Shabaab Iyo Dowlada Oo Siyaabo Kala Duwan Uga Hadley Qaraxii Xaley.
Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyada weerar ismiidaamin ahaa oo shalay galab ku qaadeen xarun ay leeyihiin Ciidanka Amisom oo ku taal wadada Wadnaha, kadib markii ragg xirnaa dareyska ciidamada milateriga dowladda kuna rakibnaa suumanka qarxay ay weerareen xaruntaas.
Afhayeenka Shabaab Cali Dheere ayaa sheegay in weerarkaas ay ku beegsadeen xarun weyn oo ay lahaayeen Amisom, kaasoo uu tilmaamay inay aheyd meelaha dagaalada laga hagayay iyo madaafiicda.
Walaalo ka mid ah mujaahidiinta oo naftooda alle ka iibsaday ayaa xaruntaas galay, labo qeyb ayay ahaayeen, qeybna markii ay rasaas ayay la daceen, qeybna gudaha ayay isku qarxiyeen”ayuu yiri Cali Dheere oo intaa ku daray in qeybta kale ay si nabad ku soo laabteen.
Cali Dheere ayaa sheegay in xaruntaas ay ku laayeen ciidamo badan oo gaareysa ilaa sodomeeyo, kuwaasoo uu xusay in weerarkii is qarxinta iyo weerarka tooska ah ay qasaare xoog leh ku gaarsiiyeen.
Sidoo kale Wasiiru dowlaha xarunta Madaxtooyada C/qaadir Macalin Nuur oo isna ka hadlay weerarkaas ayaa sheegay in ciidamada markii horeba ay feejignaayeen, isla markaana ay fashiliyeen weerarkaas.
Ma jirto wax qasaare na soo gaaray, ciidamada markii horeba waa feejignaayeen, weyna laayeen kooxiii dharka ciidanka watay, 9- ayaan dilnay, labo waa is qarxisay”ayuu yiri Wasiiru dowlaha madaxtooyada oo xusay in xarumaha weerarka lagu soo qaaday ay ahaayeen kuwa Amisom iyo xarunta Ahlusuna.
Si kastaba ha ahaatee weerarkii shalay ismiidaaminta ayaa noqonaya kii u horeeyay ee dhaca, tan iyo markii Xukuumada Farmaajo ay dalka gelisay xaalad feejignaan ah, kadib dilkii Usama Bin Laden.
Dowlada Oo Sheegtey In Ismidaamintii Xalay Ay Ka Dambeysey Dulduleel Xaga Ciidamada Dowlada.
Dowlada KMG ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay Qaraxyo ismiidaamin ah oo xalay fiidkii Ciidamada alshabab la Beegsadeen, Saldhigyo ay Ciidamada amisom ku leeyihiin magaalada Muqdisho.
Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada Khaliif C/qaadir Macalin Nuur ayaa arintaasi ku tilmamay dayacnaan ka timid Ciidamada dowlada KMG Soomaaliya, in ay arintaasi ku dhacday.
Dayac ka yimid Ciidamada dowlada KMG ee Soomaaliya ayay ku dhacday Qaraxyadaasi, maxaa yeelay haday foojigan yihiin Ciidamada Qaraxyadaas ma dhici lahayn” ayuu yiriWasiiru Dowlaha Madaxtooyada Khaliif C/qaadir Macalin Nuur.
Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada Khaliif C/qaadir Macalin Nuur oo ka hadlay weerarkaas ayaa sheegay in Al-Shabaab ay soo qaateen dharka Ciidamada, isla markaana ay soo weerareen xarun ay Ciidamada Ahlusuna ku sugnaayeen iyo kuwa AMISOM.
Sidoo kale Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada Khaliif C/qaadir Macalin Nuur ayaa dhaliisha uu u jeediyay Ciidamada Dowlada KMG ee Soomaaliya, aysan jirin wax jawaab ah oo ay ka bixiyeen arintaasi.
Ma jiraan wax qasaare ah oo ilaa iyo haatan ka soo baxaya Qaraxyadii mataanaha ahaa ee xalay fiidkii ka dhacay Saldhigyada ay Ciidamada amisom ku leeyihiin Wadad Maka al-Mukarama, oo ay sheeatay alshabaab.
Farmaajo Oo Saaka Ka Wax Yaabo Badan Ka Hadley.
R/wasaaraha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin mushaar siinta Xildhibaanada iyo shirka June ee bisha soo socota lagu qabanayo Magaalada Muqdisho.
R/wasaaraha ayaa sheegay in shirka bisha June ay ka qeyb galayaan dhamaan qeybaha kala duwan ee bulshada, kaasoo uu tilmaamay in lagu uruurin doono fikradahooda, isagoo ugu baaqay shacabka soomaaliyed inay shirkaas ay taageeraan.
Mr Farmaajo ayaa xusay in shirkaas uu yahay mid aayaha dalka looga tashanayo, waxaana uu cadeeyay inuu yahay shir ay ku kalsoon yihiin in natiijo wanaagsan ay ka soo baxaan sida uu hadalka u dhigay.
Shirka Bisha June waa shir umada soomaaliyed aayaheeda ay kaga tashanayo, shacabka soomaaliyed kaalinta ugu weyn ayay ka qaadan doonaan, gaar ahaan qeybaha bulshada, sida waxgaradka, culumaa’udiinka iyo haweenka”ayuu yiri Mr Farmaajo oo intaa raaciyay in aayaha shirka uu yahay mid umada Soomaaliyed ay u madax banaan tahay.
Sidoo kale R/wasaaraha ayaa soo hadal qaaday mushaar bixinta maalmahan ka socota magaalada Muqdisho, kaasoo Xukuumada ay u bilowday Xildhibaanada baarlamaanka, waxaana uu xusay in qaabka mushaar bixin ay tahay mid Xukuumada ay horay u dejisay.
R/wasaaraha ayaa cadeeyay in aanay wax mushaaraad ah aysan heli doonin xildhibaanada ka maqan magaalada Muqdisho, isagoo cadeeyay in xildhibaanka Muqdisho ku sugan kaliya uu mushaarka qaadan doono, hase ahaatee xildhibaankii Muqdisho yimaada ama dalka ku soo laabta uumushaarka qaadanayo.
Amisom Oo Qiratey In Khasaaro Ka Soo Gaarey Qaraxii Ismidaaminta Ahaa.
AFhayeenka ciidamada nabad ilaalinta midawga afrika Amisom Akuundha oo Xaley aan lahadlay ayaa xaqiijiyay in ey dhankooda kaga Geeriyootay laba askari mid kalana kaga dhaawacmay.
Afhayeenka ayaa intaa waxa uu ku daray in weerarku uu ku dhacay si kadis ah waqti ay isbadalaayeen ilaalada gaarka heeysay oo goobtana ay aheeyd mid aan shaki buurn laga qabin.
Warar ay dadku isla dhex marayaan aya sheegaya in qasaaruhu intaa uu ka badan yahay lkn aysan jirin cid toos u xaqiijisay.
Ilaa iyo hadda majirto cid sheegatay qaraxan waxaase la tuhunsanyahay Alshabaab oo dagaal kula jirta dowlada iyo amisom.
Maxaas Oo Galabta Dagaal Ku Dhexmarey Shabaab Iyo Ciidamada Dowlada.
Dagaal u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo Al Shabab ayaa galinkii dambe ee maanta ka dhacay dagmada Maxaas ee gobalka Hiiraan.
Dagaalkan ayaa ka dambeeyay kaddib markii Shabab ay weerar ku soo qaadeen fariisimo ay ciidamada dowladdu ku lahaayeen deegaanada Seedaan iyo Bukurre oo ka wada tirsan dagmada Maxaas ee gobalka Hiiraan, halkaas oo maalmihii la soo dhaafay ay iska horimaadyo goos goos ah ku dhexmarayeen ciidamada dowladda iyo Ciidamada Shabaab.
Guddoomiyaha dagmada ayaa sheegay in Ciidamobadan oo ka mid ahaa kuwii weerarka soo qaaday lagu dilay dagaalkii maanta halka ciidamada dowladdana ay dhaawacyo ka soo gaareen.
Xaaladda goobihii dagaalada ay ka dhaceen ayaa caawa deggan iyadoo ay wali jiraan dhaq dhaqaayo iyo xiisado colaadeed oo habeenkii sadexaad laga dareemayo deegaano ka tirsan gobalka Hiiraan ayna ka mid tahay magaalada B/weyne .
Qarax Caruur Ku Wax yeeloobeen Oo Galgaduud Ka Dhacay.
Dhaawaca labada caruurta ah ayaa yimid ka dib markii ay gar garaaceen miino ku aasneeyd duleedka ciid weeyne oo dhinaca Bari kaga aadan deegaanka mareer gur oo u dhaw dagmada Dhuusa mareeb ee dagamada Galgaduud.
Caruurtani ayaa xiliga miinada ay gar garaacayeen waxa ay la joogeen xoolo ay halkaasi ku daaq siinaayeen iyagoo xiligaa uu wehlinayey aabahood.
Labada caruurta ah oo mid ka mid ah dhaawacooda cuslaa ayaa ayaa waxaa la gaarsiiyay cisbitaal ku yaala magaalada Dhuusamareeb ee gobalka Galgaduud.
Ma ahan markii ugu horeeysay ay miino dhulka ku jirto ay ku cayaarayaan caruur ay waxyeelo u geeysato taa oo inta badan ka dhacdo gobalada dalka,
Puntiland Iyo Soomaaliland Oo Dagaal Dhexmarey.
Wararka naga soo gaaraya degmada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa ku soo waramaya in dagaal khasaare geystay uu dhexmaray ciidamo ka kala tirsan maamulada Puntland iyo Somaliland.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Maajo, 2011.